Go’aan Qaadasho Wanaagsan | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Nolosha waa waayo iyo waqti isu tagay, waxa ayna kugu soo mari kartaa wajiyo badan oo yeelan karo dhib iyo dheef intaba, maxaad u diyaarsatay caqabadaha nolosha ee kaa hor imaan karo waqti waliba? Maxay tahay sababta dadka guuleeysta ay ugu guuleeysteen noloshooda? Ma’isweeydisay maxaa dadka guul dareeystay ugu wacan guul darada?
Ma’ogtahay nolosha in ay ubbaahan tahay go’aan qaadasho adag iyo dulqaad joogta ah. Waxaaa xaqiiq ah in maalin walibo aan qaadanno go’aano joogto ah sida: marki aan laamiga soo istaagno waxa aan qaadannaa ama aan go’aan kagaarnaa nuuca gaariga aan raaci lahayn.
Qofka in uu qaato go’aan adag waxa ay qeyb ka tahay in uu nolosha u istaago hormarkeeda, ma ogathay mararka qaar nafta in ay ku qurxineeyso wado kaa hor istaagi karto Hormarka noloshaada, markaas waxaa laga baahan yahay in aad latashatid maskaxdaada ma aha laabataada. Xaqiiqada ayaa ah laabtu waxa ay ku dareensineeysaa wax-yaalaha soke ee nolosha, halka maskaxda ay ku sheegi karto maxaa ka dabeeyo waxa aad maanto aragto.
Go’aamihii nolosha ugu adkaa ee qof aadanaha uu qaato waxaa kamid ahaa go’aankii Daariq Binu Siyaad oo ahaa hogaamiyahii ciidanka Muslimiinta oo tiro ahaan aad uyaraa, waxa ayna ka tallaabeen badda Marooko iyoAndalus u dhaxeysa halkaas oo ay dagaal u aadeen, Daariq waxa uu ka baqay ciidamada muslimiinta in ay cabsigasho oo ay dib ugu laabtaan doomaha ay ku imaadeen, laakiin waxa uu guud ahaanba gubay doomihi raja galin karay dagaalmayaasha uu hoggaaminaayay, waxa uuna yiri hadal dhaxal gal noqday “badda gadaashiina ayay jirtaa Cadowgana hortiinta ayuu jiraa).
Waa labo geeri mid dooro, xaqiiqdii dagaalamyaasha Muslimiinta waxa ay is hal halleel ah u galleen dagaalkii halka ay guusha ku raacday, sababta oo ah ma’aysan jirin rajo danbo oo dib unoqosho ah.
Nolosha mararka qaar waxaa kusoo mari karta xaalado u baahan in aad ka qaadato go’aamo aad u adag haddii aad qaadatidna ku horseedi doono noloshaada wax badan ka badlo.
Qofka kasto oo guuleeystay waxa uu qaatay go’aan adag oo guusha u horseeday hormar, qofkii ka tago shaqo si uu naftiisa u hormariyo, waxa uu qaatay go’aan wanaagsan. Walow dadka qaar ay laayabi doonaan. muhiim ma’ahan dadka layaabkooda ee muhiimadda ayaa ah in aad gar u leedahay guusha oo cidna gaar u laheyn.
Waxaan aniga Miski ahaan kula talinayaa dhalinyaradeenn in ay qaataan go’aan wanaagsan si ay nolosha wax oga badalaan waxa aana leeyahay ogaada go’aanka wanaagsan waa furaha guusha iyo hormararka.
Kawaran qof xalaad adag ku jira oo aan awood u laheyn in uu ka qaato go’aan, si uu uga dhaxbaxo nolosha adag. Maalin walbo waxaa dhacdo oo aan aragnaa dhalinyaro badan oo ku nool nolol aysan rabin, sidoo kale kuwa ayaa ka shaqeeyo shaqo aan u qalmin, sidoo kalena kuwa ganacsigooda u rabo hormar haddana aanan sameeyn, waxa ka hortaaganahay ay yihiin caqabadaha nolosha oo go’aan wanaagsan laga qaadan waayeey.
U istaag hormarkaada nolaleeyd qaado mar walbo go’aano wanaagsan adigoo waliba latashanaayo maskaxdaada.
Tags: Go’aan Qaadasho Wanaagsan
Next post "Jalmad Shaah ah iyo Bakeeriyo Deyn ah Ayaan ku Billaabay Maantana Waxaan Leeyahay Hanti Badan"
Previous post 8 Dabeecadood Oo Keeni Karo Dib U Dhac Nolosha